Ungayibona Kanjani i-Fake AirPods Pro? Ingabe Kufanele Uthenge Noma Ungathengi? - Izesekeli
I-Apple isichazamazwi semikhiqizo ye-premium-grade ngekhwalithi yayo ephawulekayo nodumo. Kodwa-ke, umkhiqizo onamanani aphezulu uvame ukuba nemikhiqizo yomgunyathi etholakalayo. I-Apple AirPods Pro yakho nayo iyahlukile. Ngakho-ke, kuba yinto ebalulekile kuwe ukuhlola ubuqiniso be-Airpod.
Uma ufuna ukunciphisa amathuba okukhwabanisa futhi ufune ukuthola i-Apple AirPods Pro yangempela, ungahle uthande ukubheka lo mhlahlandlela. Iza nezeluleko nezindlela ezahlukahlukene zokubheka ama-AirPod akho. Ngakho-ke ake siqale ngesinyathelo sokuqala okufanele usithathe:
Sebenzisa Iwebhusayithi ye-Apple ukukhomba i-Fake AirPods Pro:
Hhayi i-AirPods kuphela, kepha i-Apple inikeza inombolo ye-serial yomkhiqizo ngamunye. Ngu ngokuchofoza lapha , ungaqinisekisa inombolo ye-serial ukubona ukuthi ingumkhiqizo wangempela noma cha. Akufanele ube nomuzwa wokuthi wenza noma yini engalungile ngokuskena inombolo ye-serial. Noma yimuphi umthengisi oyiqiniso uzokuvumela ukuthi uhlole inombolo ye-serial. Nazi izinyathelo okufanele uzilandele:
Inombolo ye-serial ye-Airpods Pro ingaphakathi kwecala.
Susa ama-AirPods, futhi lapho uzothola.
Kungaba kuncane kakhulu. Ngakho-ke, ungahle udinge amandla okukhulisa
Noma ngabe ikuphi, vakashela i- isixhumanisi esilandelayo kudivayisi yakho
Sicela ubhale phansi inombolo ye-serial bese uhlola kabili ukuze uqiniseke ukuthi ilungile.
Isikhathi esiningi, i-Apple izokhombisa ngemiphumela futhi iqinisekise ukuthi iwumkhiqizo oyiqiniso. Lokhu kwehlisa amathuba okuthola umkhiqizo ongumbombayi ngama-90% noma ngaphezulu. Hhayi nje icala, kepha ama-AirPod nawo azoba nenombolo ye-serial. Ngakho-ke, unganciphisa amathuba okuthola umkhiqizo ongumbombayi.
Kodwa-ke, abanye abantu bazokunikeza icala langempela kepha babe sezingeni eliphansi noma bangqongqoze ama-AirPod. Ngalokho, landela isinyathelo esilandelayo.
Izici Cabanga Ngenkathi uthenga i-Airpod Pro:
1. Bheka Ikhwalithi Yokwakha
Ukuthi izinyathelo zangaphambilini ziyasebenza noma cha, kuhlale kuwumqondo omuhle ukuhlola ikhwalithi yokwakha ye-Apple. Manje, uma ungumsebenzisi we-apple okade ekhona, usuvele uyayiqonda ikhwalithi ephawulekayo enikezwa yi-Apple. Ngakho-ke, kungaba lula kuwe ukuthi ubheke la maphuzu.
Kodwa-ke, uma ungumsebenzisi omusha we-Apple, kungakuhle ukuthi uqonde ukuthi i-Apple ayilokothi ihlehlise ikhwalithi yemikhiqizo yabo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuhlola i-Apple AirPods Pro ukuthola imininingwane engcono ngobuqiniso. Nazi izikhombisi zakho:
2. Umbala Wezingxenye
I-Apple yaziwa ngokunikeza ikhwalithi yembala emnandi. Uma ikulethela ama-Airpod anemibala ‘emnyama’, kuzoba mnyama. Ngeke kube khona umbala ompunga. Awukho umbala ozoguga noma ubukeke ungcolile nganoma iyiphi indlela. Ngakho-ke lokhu kungaba ukutshela kwakho kokuqala. Umkhiqizo we-Apple unokucwebezela okumangalisayo ngenxa ye-premium-material esetshenzisiwe. Ngakho-ke, ukukhanya kokukhanya kuzoba bukhali, kungabi ukufiphala, noma kufiphale.
Kungafana nokubuka ingilazi. Noma kunjalo, lokhu kungadukisa kancane. Ungahlola izinto ezahlukahlukene ezinjengezansi, ama-diffusers, kanye nemibhalo yokuhlolwa kombala okungcono. Imibhalo ye-Apple kumkhiqizo ngamunye inamandla, ibonakala ngokusobala, ngaphandle kokufiphala. Uma ngabe icala noma ama-AirPod efiphalisiwe noma ebhalwe ngwevu, kungenzeka ukuthi ngumgunyathi.
3. Hlola Izingxenye
Ucezu lwangempela lwe-AirPods Pro luzoba nokwakhiwa okuqondile. Ungabheka ikhwalithi yokwakhiwa kwecala bese uzama ukuyivula nokuyivala. Uma ingazizwa ibushelelezi, kungenzeka ukuthi ingumbombayi. Ngokwengeziwe, ungabheka izipikha nekhwalithi ye-diffuser.
Ama-knockoffs amaningi anombala ngenxa yokuxubeka okungafanele kwezinto noma izinto ezishibhile. Kungabonakala emingceleni yanoma iyiphi into. Isibonelo, kungahle kube nesiliva noma ulwelwesi olungcolisiwe oluzungeze i-diffuser uma umzimba we-AirPod umhlophe.
Ngokufanayo, akufanele kube khona umbala ompunga noma umbala owengeziwe wombala kuma-AirPods akwa-Apple. Bagcina ingqikithi yombala iqondile. Imbobo yecala lakho kufanele ibe umbani. Uma kuwuhlobo-C noma yini enye, kungenzeka ukuthi kube yi-knockoff.
4. Kusuka Ekukhanyeni - Kholwa Imvelo Yakho
Usuvele uyayiqonda ikhwalithi i-Apple efanayo. Ngakho-ke, kusukela ekubukeni kokuqala, uzokwazi ukusho ukuthi ama-AirPods ayiqiniso yini noma cha. Ungalandela ngokuqinile imizwa yakho yamathumbu uma ikutshela ukuthi akuwona umkhiqizo wangempela.
Uma uqhubeka nokuhlola izinto, cishe uzothola lo mehluko. Ngakho-ke lokho kuzokusiza nokuthi unciphise iwindi lobuqiniso.
Isikhathi esiningi, umgumbathi wehluleka ukukopisha imininingwane ephelele ye-airpod eyiqiniso. Kungahle kube nenombolo ye-serial engekho. U-‘L noma u-R ’ku-Airpod ngayinye kufanele abe neqiniso futhi abhalwe. Icala lizokutshela ukuthi 'Liklanywe yi-Apple And Assembled In China'
Amanye amathiphu asheshayo:
Uma ungafuni ukwazisa umthengisi, noma uma uzizwa ungakhululekile ukuhlola ama-Airpod noma icala, nazi izeluleko ezisheshayo zokukusiza ukunquma ubuqiniso:
Zama ukubhangqa i-Air Pods Pro nedivayisi yakho. Akufanele kuthathe ngaphezu kwemizuzwana engu-10 ukuthi usethe uphinde ubhanqe amadivayisi akho. Uma kwenzeka, khona-ke kungaba mbumbulu.
I-Apple isebenzisa izwi elimnandi nelicacile ekuxhumekeni kwayo. Kodwa-ke, ama-knockoffs amaningi asebenzisa izwi elixegayo elizizwa lingalungile. Imvamisa, basebenzisa ukurekhoda okungeyona isiginesha ye-Apple. Ngakho-ke ungayihlola.
Uma ungaqiniseki nganoma yisiphi kulezi zinyathelo ezimbili, ungabheka inqubo yokukhansela umsindo. I-Apple AirPods Pro inokukhanselwa komsindo. Njengoba kuyindlela ebizayo, ama-knockoff amaningi amaningi ngeke ayihlanganise. Uma uyihlola, maningi amathuba okuthi uthole ukuthi ingabe umkhiqizo wangempela noma cha.
Umkhiqizo wangempela uzobukeka ubushelelezi futhi 'usemgqeni' ngaphandle kokuqhuma noma iyiphi into yokwakha. Uma noma iyiphi into iqhuma njenge-diffuser, imakrofoni, noma isipikha, kungenzeka ukuthi ingumbombayi.
Ungasebenzisa futhi i-'Thola My AirPods Pro 'ukubona ukuthi iyasebenza yini. Kokuningi komgunyathi, lokhu akusebenzi.
Zama njalo ukuthenga kubathengisi beqiniso, ungayi kubathengisi besekeni noma labalamuli. Le ngenye yezindlela eziqinisekile zokuthola i-Apple AirPods Pro yangempela. Kodwa-ke, le mihlahlandlela kufanele yanele uma uke wangabaza.
Amamodeli we-iPhone 12 (A2172, A2404)